Barnaamijka Ilaalinta Kireysiga - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|U adeegida Bulshooyinka|Caawinta Guri La'aanta|Barnaamijyada Maalgelinta Mulkiilaha|Barnaamijka Ilaalinta Kireysiga
Wargelin Muhim ah:
Lacag -bixinta Barnaamijka Ilaalinta Kiraysiga ee la oggolaaday sheegashooyinka lama filayo in ka badan laba iyo toban bilood laga bilaabo taariikhda oggolaanshaha sheegashada. Oggolaanshaha sheegashadu waa dammaanad -qaadid lacag -bixin laakiin maaha taariikhda lacag -bixinta.
Ka saaritaanku wuxuu cadeeyay inuu yahay sababta ugu weyn ee kiisaska cusub ee hoy la'aanta ah ee ku baahsan Washington. Barnaamijka Ka Hortagga Kireysiga wuxuu u faa'iideystaa milkiilaha guriga iyo kireystaha labadaba adoo dayactiraya kireysiga iyagoo ku qancinaya xukunka. Tani waxay ka celineysaa milkiileyaasha inay la kulmaan qasaare banaan iyo wareejin iyadoo laga hortagayo guri ka saarid taasoo caqabad ku noqon doonta kiraystayaasha inay helaan oo kireystaan ​​guryo mustaqbalka ah.
Barnaamijka Ilaalinta Kireysiga Gobolka Washington (2019 wax ka beddelka RCW 59.18.410 (3) iyo 43.31.605 (c)) wuxuu dhaqan galay Juun 29, 2019. Barnaamijku wuxuu yareynayaa hoy la'aanta iyadoo u fidineysa gargaar kiraystayaasha dakhligoodu hooseeyo ee wajahaya ka saarista lacag-bixin la'aan kirada. Ganacsigu wuxuu u soo saari doonaa amaah dulsaar la'aan ah milkiilayaasha guryaha si loo ilaaliyo kiraysiga. Kireystayaasha waa inay dib u bixiyaan amaahda si ay ugu qalmaan mustaqbalka helitaanka barnaamijkan.
COVID-19 gargaar halkii Senate Bill 5160 (2021): Sheegashooyinka la xiriira kirada lagu leeyahay laga bilaabo Maarso 1, 2020, illaa Dec. 31, 2021, waxaa ku jiri kara ilaa saddex bilood oo kirooyinka mustaqbalka ah (heerka kirada qandaraaska).
Ayaa Sheegan Kara?
Dhammaan milkiileyaasha gaarka loo leeyahay iyo kuwa aan macaash doonka ahayn ee bixiya guryo kiro ah oo ku dhex yaal Gobolka Washington waxay xaq u leeyihiin Barnaamijka Ilaalinta Kireysiga. Amar maxkamadeed oo lagu helo kireyste u qalma qaddarka xukunka ayaa looga baahan yahay inuu helo lacag bixin si guul leh.
Sida Looguqalmo Barnaamijka Ilaalinta Kireysiga
Amarka maxkamadda ee u-qalmitaanka ayaa looga baahan yahay inuu si guul leh ku soo gudbiyo dalab dalab ah. Si loo helo amar maxkamadeed oo ku saabsan u-qalmitaanka, milkiilaha guriga iyo kireystaha labadaba waa inay si shakhsi ah u yimaadaan Maxkamadda Sare ee degmada kirada ah oo ay codsadaan mid ka mid ah kuwan soo socda:
Heshiiska Lacag bixinta
Heshiiska Maalgelinta Ilaalinta Kireysiga
Heshiiska Lacag Bixinta (Sctipulated Agreement) waa dukumiinti tilmaamaya taariikhaha ugu dambeeya ee bixinta kirada guriga ee la soo dhaafay. Haddii kiraystaha uu ku bixiyo dhammaan lacag-bixinta waqtigiisa, kiraysigiisu wuu sii jirayaa. Haddii kiraystaha uu ku guuldareysto inuu buuxiyo shuruudaha heshiiskan, kireeyuhu wuxuu dalban karaa caawimaad barnaamijka si loo ilaaliyo kiraysiga. Haddii kiraystaha uu banneeyo ama uu siiyo kireeyaha ogeysiin ah inuu ka baxo guriga, sheegashada waa la diidi doonaa.
Maxkamad ay amartay Helitaanka U-qalmitaanku waa dukumenti muujinaya in Xaakimku ku helay kiraystaha inuu yahay dakhligiisu hooseeyo, awood yar ama dhaqaale xumo haysato haddana awood u leh dib u bixinta qaddarka xukunka.
Dib u eeg Su'aalaha Badiya La Weydiiyo dukumiinti wixii faahfaahin dheeraad ah.
Dukumiintiyada Looga Baahan Yahay Sheegashada
Dukumintiyada soo socda iyo macluumaadka ayaa looga baahan yahay gudbinta dalabka. Fadlan soo ururi dukumiintiyada oo dhan kahor intaadan isku dayin inaad gudbiso dalab:
Aqoonsiga Iibiyaha Gobolka oo dhan (Lacagta) lambar
Heshiis kiro la fuliyay iyo mid hada socda
Helitaanka u-qalmitaanka, iyo
Xukunka milkiilaha oo muujinaya qaddarka lagu leeyahay, iyo
Qoraalka Dib-u-Celinta ee Ficil Joogitaan
Foomka Ictiraafka Kiraystaha, ama
Foomka Kiraystaha Maqnaanshaha
Buuxi foomka dalabka internetka
La talinta Midabtakoorka Mulkiilaha (shabakad)
Barnaamijka Yaraynta Mulkiilaha (shabakad)
Xidhiidhka Barnaamijka Ilaalinta Kireysiga
Lambarka Aqoonsiga Iibiyaha Gobolka oo dhan (shabakad)
Xeerka Oggolaanshaha: RCW 43.31.605 (shabakad)
Sharciga Shaacinta Dadweynaha, Cutubka 42.56 (shabakad)
Xaashida Macluumaadka Ilaalinta Kireysiga (PDF)